गणतान्त्रिक नेपालको छातीमाथि राजावादीको बेमौसमी हुँकार -
गणतान्त्रिक नेपालको छातीमाथि राजावादीको बेमौसमी हुँकार
२ पुष २०७७, बिहीबार १४:३५ Hello Nepal Tv	0 Comments
शिशिर ऋतु अहिले वैंशालु अवस्थामा छ । जाडोले गर्दा नेपालको भूमि बेस्सरी चिसिएको छ । र, चिसोसँगै हिमालमा हिउँको थुप्रो बढ्दै छ । त्यसकारण, चिसो सिरेटोले मान्छेका शरीर काँपिरहेको अवस्थामा मानिसहरु न्यानो कपडा अनि बासको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् । मानिस तातो खानाको चाजोपाजोमा व्यस्त छन् । तर जोसँग न्यानो कपडा, न्यानो बास अनि तातो खाना छैन भन्नुहोस् त उनिहरुको अवस्था कस्तो होला ? जाडो मौसममा कोही न्यानो ओतको खोजीमा छन् भने कोही तातो खानाको ।
तर, गत हप्ता सडकमा मोटरसाइकलको ठूलो भिड थियो, जसको खोजको उद्देश्य नितान्त फरक थियो । मानौ त्यो हुलले केही खोजिरहेको छ । हरेक दिन अनि हरेक रातसम्म । के त्यो हुलले जनताको लागि तातो गास, न्यानो बास र कपास खोजेको हो तरु के त्यो हुलले नेपालको स्थायित्व अनि समृद्धि खोजेको हो ? पक्कै पनि होइन । त्यो भिड जनताको खातिर न्यानो गाँस, बास र कपासको खोजीमा थिएन । त्यसकारण, त्यो भिडले अहोरात्र खोजेको व्यक्ति जनता थिएन, जनताको आवश्यक्ता थिएन–राजसंथा र हिन्दुराज्य थियो । त्यो हुलको खोजीको केन्द्रबिन्दु नरेश थियो । किनकि त्यो हुलको टड्कारो नारा भित्र ‘राजा आउ देश बचाउ’ को आवाज बुलन्दित थियो । जुन आवाजले सडक र गल्लिहरु हिजोआज दुर्गन्धित भएका छन् ।
को हुन् त ती बाइकको हुलमा घोक्रो फुट्नेगरि चिच्याउने मनुवाहरु ? अरु कोही होइनन् । ती राजाको भरौटे हुन् । जसले हिजो दरवारको जुठोपुरो खाएर बाचेका अनि दरवारको छत्रछायामा हुर्केका राजाको चाकडीवाजहरु नै आज राजाको पक्षमा खुलेआम सडकमा दौडिरहेको छन् । जो कोक्रोमा हुर्कदै गरेको शिशु संघीयता र गणतन्त्रको निर्मम रुपमा हत्या गर्न अग्रसर छन् । यो झुंडको आरोप छ गणतन्त्रवादीले केही गरेनन् । अग्रगामीले केही लछारपाटो लगाएन। राजावादीहरुको बेलाबेला भन्ने र गर्ने यस्तो हर्कहरु देख्दा अनि सुन्दा जनताको मनमा केही गम्भीर प्रश्नहरु ठोकिँन्न थालेको छ ।
← कृषि बिकास बैंकले बिना धितो ऋण दिने | तालिम संगै राहत पनि प्रदान | सियारी, रुपन्देही
विभिन्न पार्टी परित्याग गरि १२५ जना नेकपा प्रवेश →
“बद्रि पंगेनीसँग प्रत्यक्ष दोहोरी गाउने सौभाग्य पाए “-प्रिन्सु पौडेल | कविता वाचनमा उत्तिकै अब्बल |
४ भाद्र २०७७, बिहीबार ०८:५३ Hello Nepal Tv	0
“सकारात्मक भावसंगै कहिले पनि हिम्मत हारिन,मैले गर्न नसकेको काम अबको पिढीले पुरा गरुन्’ -सुनिल गुप्ता
५ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०८:३७ Hello Nepal Tv	0